SAMAFALKA/NGOs REER GALBEEDKA: Maxaa laga dhaxley? | Wargeyska Xog-Ogaal
SAMAFALKA/NGOs REER GALBEEDKA: Maxaa laga dhaxley?
Ka dib 18 sanno oo samafal iyo gargaar laga sugo/la waydiisto Hay’adaha samafalka reer Galbeedka. dhaxalka laga helay wuxuu noqotey in la waayo madax banaanidii Dadkeena iyo Dalkeena, xag dhaqaale, Waxbarassho, Warsoosaarka iyo waliba Siyaasadi. laga yaabo in qof kastoo Soomaali ah aanu arki karin laakiin aan halkan ku soo koobo sida wax u jiraan waqtigan xaadir ah.
Hay’adda cunada Aduunka ee WFP waxay ku doodaa/sheegataa inay quudiso in ka badan 2.5 Milyan oo Soomaali ah, oo haddii ay waayaan gargaarkooda ay gaajo u dhiman doonaan Waa sida ay WFP sheegto ! Si ay dadkaas u quudiso WFP waxay u yeeratey Ciidan dhinacyo badan ah sida midka Badda iyo Midka Dhulkaba si ay cunadaas u gaarsiiso Maamisheeda/Dadka tabaaleysan ee ay WFP israaqdo/quudiso.
Hay’adda Qaramada Midoobay (UNKa) ugu qaybsan horumarinta ee loo yaqaab UNDP waxay si joogta ah taakulo dhaqaale u siisaa Baarlamaanka (beelaha) ee ku dhisan 4.5ka, iyo Dowlad ku sheegii TFG ee Dalkeena ku soo hodaamisay cadowgeena Xabashida. UNDP waxay sidoo kale ilaa hadda taageertaa Ciidanka nadab ilaaliyaasha lagu sheego ee Afrikaanka (AMISOM) ee Muqdisho xoogga ku jooga. Ciidankan AMISOM waxaa soo kireystay Dowladaha reer Galbeedka ee gaalada ah sida Mareykanka iyo xulufadiisa.
Dhamaan Degmooyinka iyo Tuulooyinka Dhulka Soomaaliya waxaa ka howl galla Hay’ado “NGOs” inta badan ah kuwo Diinta Masiixiga ah. Waxay ka shaqeeyaan Waxbarashada, Caafimaadka, Horumarinta Biyaha “Ceelasha Biyaha” iyo waliba Wax-soosaarka beeraha iwm. arimahaan oo dhan waa howlihii ay qaban laheyd Dowlada Dalka markaa ka jirta laakiin waxaa hadda meeshaa galey NGOs oo iyagu danno dheer ka leh Dalkeena. Runtii waa barnaamij qarash badan u ku baxey 18kii sanno ee la soo dhaafey, laakiin Hay’adahani waxa uu qorshohoodu yahay in Degmo iyo Tuullo kastaa ee dhulka Soomaaliya ka mid ay noqoto mid aan ka maarmin oo dhinac kasta iyaga ku tiirsan. Tusaale: In markii ay abaari dhacdo ! in NGOs la baryo ! Haddii Iskuul in la dhiso la rabo in NGOs la baryo ! Haddii shir nabadeed in la qabto la rabo in UNDP la baryo iwm.
Hay’adda QM ama UNta waxay hadda baneysteen inay siday doonaan ugu xad gudbaan madaxbanaanida Dalka Soomaaliya. UNtu waxay gaartey heer in Dowlad u tahay ama hadba Dowlad tii ay rabto ka dhisato, ogoow UNta waa furaha Mareykanka iyo gaalada guud ahaan markey noqoto la macaamilka Dowladaha ama Dadyawga Muslimka ah ee dulmiga lagu hayo.
Ma kula tahay in Dadka Soomaaliyeed ay ka maarmi karaan kaalmada ama gargaarka gaaladda ee ciribteedu tahay in lagu gumeysto ama dhulkaaga iyo madax banaanidaada aad ku waydo ?.
Jawaabta su’aashaasi waxay u taal guud ahaan Dadka Soomaaliyeed meel kasta ha joogaan. Laakiin waxaa hubaal ah in aanba wali lagu baraarugin faragalinta iyo dhibaatooyinka ay Ummadda Soomaaliyeed ku hayaan hay’addaha NGOs reer Galbeedka iyo waliba Hay’adda Qaramada Midoobay oo uu ku shaqeysto dalka Mareykanka.
Ma garan kartaa waxa uu shacabka Soomaaliyeed u dhimay Dalka Mareykanka iyo waliba xulufadiisa? Maanta waxaa iska cadaatey in Reer Galbeedku cadow ku yihiin Ummadda Soomaaliyeed. 2006dii ayey aheyd markii Mareykanku u soo hiiliyay Ciidankii Xabashida ee sida gardarada ah ku soo galey Dhulkeena. Mareykanka wuxuu dilay oo dhibaateeyay dad shacab Soomaaliyeed ah oo aan waxba galabsan. Reer galbeedku waxay u neceb yihiin dadka Soomaali waa kaliya inay Muslimiin yihiin.
Marna inay ku dilaan/dhibaateeyaan marna inay kuu gargaaraan isku meel ma gashaa ? Maya Samafalka NGOs ma aha mid adiga wax kuu tara , ee waa mid aad ka dhaxleyso Wax-soosaar la’aan, Isku kalsooni xumo, Alle caasinimo, iyo waliba in lagugu gumeysto.
This entry was posted in QARANIMO. on 03/10/2009 by Abdirasak.
← XUKUN LAGU RIDAY: Afar Wiil oo Gabar kufsadey! XIJAABKA: Sh Axmed Diidat. →